Isbeddellada & raadinta maqaalada mawduuca:ciyaaraha fiidiyowga
Dimitrescu, Marwada Degan ee Tuulada Xun, ayaa Sharaxay: Sheekada buuxda ee Vampire Grand Lady
2021-05-12 Ciyaaraha fiid...
Lady Dimitrescu iyo gabdhaheeda ayaa ku faraxsan inay kula kulmaan. Capcom; shaashadda shaashadda ee Sean Keane / Waxaad ku ciyaareysaa aabbaha walaacsan ee Ethan Winters oo deggan Tuulada Xun, laakiin aan runta u sheegno, isagu ma ahan xiddigga dhabta ah ee muuqaalka. Maya, baraha bulshada ayaa sha
Next-gen PlayStation VR: 4K iyo isha raadinta?
2021-05-11 Ciyaaraha fiid...
PlayStation VR-ka cusub ayaa ku jira shaqooyinka Sony. Dhowr is-diidmo ka dib, nooca cusub ee PSVR ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay PlayStation dhowr toddobaad ka hor. Munaasabada awgeed, soo saaraha Japan ayaa si gaar ah u soo saaray kantaroolayaasha la socon doona headset-ka dhabta dhabta ah. Barn
Baldur’s Gate: Isbahaysiga Madow si loo helo dekedda PC ka dib 20 sano ka dib kombuyuutarrada
Waa kuwan war weyn oo loogu talagalay taageerayaasha Baldur's Gate franchise iyo gaar ahaan isbahaysiga mugdiga ah ee la sii daayay 2001 ee PS2, Xbox, GameCube iyo Game Boy Advance. Burburka caanka ah ee loo yaqaan 'nslash hack nslash' ayaa ah mid aad uga ficil-celin badan ciyaaraha kale ee xayeysii
PS5: wali way adagtahay in la helo… 2022?
PlayStation 5 waa mid ka mid ah badeecadahan dhifka ah ee aad u bogaadiso xitaa inbadan markii aadan heli karin. Tan iyo markii ay soo baxday bishii Noofambar 19, 2020, waxay iibisay in ka badan 7.8 milyan oo nuqul inkasta oo ay weli aad u adag tahay in laga helo suuqa. Sida laga soo xigtay Hiroki T
Microsoft ayaa soo bandhigtay warbixintii reer Yurub ee Xbox Game Pass daraasad ahaan
Microsoft ayaa hadda la wadaagtay natiijooyinka daraasad ku saabsan Xbox Game Pass iyo sida adeeggu u saameynayo nolosha cayaartoyda Yurub. Daraasaddan waxaa la qabtay bishii Diseembar 2020 iyada oo lala qaatay ciyaartoy Xbox ah waxaana jiray ku dhowaad 14,000 oo jawaab-bixiyeyaal ah, oo deggen wadd